Blog Suppliers sy ny Factory - China Blog Manufacturers
Hospital Cubicle Efitra lamba
Hospital Bed Ny Lamba Rongony
Manam-paharetana sy Maternity Wear
Flame Retardancy Fitsipika
ny mpitantana ny 18-09-17
Lamba ampiasaina in-bahoaka ankamaroan'ny toerana (anisan'izany ny hopitaly, trano fitaizana ny be antitra, sekoly, fiangonana, efitrano malalaka, teatra, sy ny maro hafa.) No takina mba ho fanamarinana ara-panjakana toy ny lelafo retardant. Tsy mitovy amin'ny firenena fitsipika momba ny lelafo retardancy. UK: BS 5867-2: Flammability fitsapana ho an'ny damba for cu ...
Isan-karazany Flame Retardancy
Hospital Cubicle ambainy no takiana mba ho lelafo retardant (aka afo retardant na fohy toy ny FR). Misy isan-karazany ny lelafo retardancy. Temparory lelafo retardancy (TFR) dia foana ny post-tenona fitsaboana simika, na amin'ny alalan'ny retardant indray ny lelafo-coating na mandroboka ny lamba ...
Hospital Ny Lamba Rongony sy Management Supply Services Market
Entin'ny filàna augmenting be pitsiny sy madio ara-pitsaboana sy ny toeram fahasalamana, ny eran-tsena ho an'ny toeram-pitsaboana sy ny fitantanana ny famatsiana rongony fotsy asa no mety ho vavolombelona ho matanjaka ao amin'ny tsy mivoaka fiakaran'ny taona. Ny tsena, izay nitsangana teo amin'ny US $ 7.4 bengali tamin'ny 2015, dia kasaina mba hanitarana amin'ny ...
Adiresy: No.999 Xugongqiao Rd, Kunshan Huaqiao, Jiangsu Province, Sina.
Lamba ampiasaina in-bahoaka ankamaroan'ny toerana (anisan'izany ny hopitaly, trano fitaizana ny be antitra, sekoly, fiangonana, Audi ...
Hospital Cubicle ambainy no takiana mba ho lelafo retardant (aka afo retardant na fohy toy ny ...